खाडी र मलेसियामा जस्तै अब अमेरिकाले पनि नेपाली कामदार माग्यो, जाने प्रकृया यस्तो छ ! - लण्डन काठमाडौँ
विविधFebruary 29, 2020
खाडी र मलेसियामा जस्तै अब अमेरिकाले पनि नेपाली कामदार माग्यो, जाने प्रकृया यस्तो छ !
काठमाडौं – अमेरिकी सरकारले कामदार भिसाको आवेदन डीभी लोटरी जसैगरि भर्न मिल्ने भएको छ । कामदारका लागि अमेरिकाले डीभी लोटरी जस्तै आवेदन लिएर भिसा दिने भएको हो । जुन भिसा अमेरिकाले खुल्ला गरेको छ । एचवान बी भिसा खुल्ला भएसँगै यसको अनलाइन दर्ता पनि सुरु हुने भएको छ ।
अनलाइनमार्फत दर्ता अवधि मार्च १ को दिउँसो १२ बजेबाट सुरु हुने युएससीआईएसले घोषणा गरेको छ ।
नेपाली समय अनुसार दिउँसो १२ बजेदेखि दर्ता खुल्ने र मार्च २० दिउँसो १२ बजेसम्म दर्ता गर्न सकिने युएससीआईएसले जनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तोकिएको अवधिभित्र आवेदक र उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले आवेदक र लाभग्राहीको विवरण भरेर अनलाइनमार्फत दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
हरेक दर्ताका लागि युएससीआईएसले कन्फर्मेशन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । उक्त नम्बर रजिस्ट्रेशन ट्रयाक गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
तर उक्त नम्बर केस नम्बर नभएका कारण युएससीआईएसको केस स्टाटस हेर्न भने प्रयोग हुनेछैन ।
कामदार भिसा एचवानबीमा दर्ता गर्नका लागि १० डलर दर्ता शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अन्तिम नियम प्रकाशित गर्दै कामदार भिसा एचवानबीका लागि दर्ता शुल्क १० डलर लिने जानकारी दिएको थियो ।
यो बर्षदेखि अमेरिकी सरकारले एचवानबी कामदार भिसामा नयाँ नियम ल्याएको हो । विद्युतीय रुपमा दर्ता हुने बाहेक अरु नियम सन् २०१९ देखि नै लागु गरिएको थियो ।
यसैबर्षदेखि लागु नयाँ नियमले अमेरिकन डिग्री नलिएका विदेशी कामदारलाई अमेरिका आउन थप मुस्किल बनाएको छ ।तर अमेरिकन डिग्री होल्डरका लागि भने विगतको तुलनामा निकै सहज बनाएको छ । अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा नै डिग्री लिएकाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी कामदार भिसाको नयाँ नियम ल्याएको हो ।
एचवानबीमा दर्ता भएका श्रमिकको आवेदनहरुलाई लोटरीको माध्यमबाट छनोट गरिने छ । त्यसपछि छानिएका आवेदनहरुमध्येबाट थप अन्य प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ ।
श्रमिकले भने भिसाका लागि भने रोजगारदाता कम्पनी खोजेर आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । आवेदनबाट छनौटमा परेका श्रमिकले भने अमेरिकी रोजगारदाता कम्पनीमा सिधै सम्पर्क गर्ने सकिने जनाइएको छ ।
Source: Online Khabar Published on 2022-05-26
बालेनः स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह कसरी काठमाण्डू महानगरमा निर्वाचित भए, अब उनका चुनौती कस्ता
Source: BBC News नेपाल - समाचार, भर्खरै प्राप्त समाचार, भिडिओ, विश्लेषण, प्रतिक्रिया | बीबीसी नेपाली Published on 2022-05-26
इतिहास रच्दै बालेन्द्र साह बने काठमाडौंका मेयर
Source: Nepal Press Published on 2022-05-26
काठमाडौंको उपमेयरमा भारी मतान्तरसहित सुनिता डंगोल विजयी
२७ वर्षसम्म निर्विकल्प भनिएको निजगढको विकल्प अनिवार्य
गठबन्धन फलिफाप, शासकीय अस्थिरता कायमै
अर्घाखाँचीमा बाघले घरभित्र पसेर अाक्रमण गर्दा ८ वर्षीय बालककाे मृत्यु
घण्टाघर क्षेत्रको सडक मर्मत गर्ने, ३० युनिटसम्मको विद्युत महशुल तिरिदिने
काठमाडौं महानगरमा कमजोर बन्यो एमाले
बाजुराको बुढीगंगामा पुनः मतदान हुने, सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई तीन दिन भित्र हटाउन निर्देशन
काठमाडौंको मतगणना सकियो, अन्तिम वडामा कांग्रेसको जित
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी निर्णय बदर, विकल्प खोज्न आदेश
रुस-युक्रेन युद्धः विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी रोक्न नसकिने विश्व ब्याङ्कका प्रमुखको चेतावनी
नेपालमा थप कुनकुन सेवामा हडताल गर्न निषेध छ, गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ
मङ्कीपक्स: नेपालमा यो रोगविरुद्ध खोप उपलब्ध छ कि छैन